सागकाे बजेटमा मन्त्रीलाई दौरा–सुरुवाल ! स्वर्ण जितेर देशको नाम राख्नेले सामग्री पनि पाएनन् – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/सागकाे बजेटमा मन्त्रीलाई दौरा–सुरुवाल ! स्वर्ण जितेर देशको नाम राख्नेले सामग्री पनि पाएनन्
सागकाे बजेटमा मन्त्रीलाई दौरा–सुरुवाल ! स्वर्ण जितेर देशको नाम राख्नेले सामग्री पनि पाएनन्
धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिकाकी सोनी गुरुङले सागअन्तर्गत पोखरामा भएको ट्रायथलनमा प्रतिस्पर्धामा स्वर्ण पदक हात पारेकी हुन् । सशस्त्र प्रहरी बलमा भर्ती भएपछि पछिल्लो ४ बर्षयता उनी ट्रायथलनमा अभ्यस्त थिइन् ।
भर्ति नहुँदैदेखि उनले चलाउँदै आएको साइकलले अन्ततः पदक दिलायो । उनले साइकल थोत्रो छ, यो फेर्न पर्छ भनेर धेरै पटक अनुरोध गरिन्, तर कसैले सुनेन्, अन्ततः त्यही थोत्रो साइकलमै उनी भिडन्तमा उत्रिइन् र देशका खातामा स्वर्ण पदक थप्न सफल भइन् ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने उनीसँ प्रतिस्पर्धामा लगाउनका लागि पोशाक समेत थिएन । देशको नाम, झण्डा र खेलाडीको नाम अंकित पोषाक लगाएर खेल्नु पर्ने खेलमा उनलाई त्यो पोशाक पनि प्राप्त भएन । उनले तोकिएको पोषाक अर्थात ट्राइसुटबिनै प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको थियो । पोषाकमा देशको कुनै निसानी नहुँदा उनी कुन देशबाट खेलेकी हुन् भन्ने नै धेरैलाई थाहा लागेन । उनललाई कतिले तपाँइ नेपाली खेलाडी हो र रु भनेर पनि सोधियो ।
ट्रायथलनको नयाँ ट्राइसुटको २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । तर सोनीसँग त्यो रकम खर्चेर किन्ने सामथ्र्य भएन । बारम्बार माग गर्दा पनि प्राप्त नभएपछि उनी पुरानो स्विमसुटकै भरमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन बाध्य भइन् । देशमै भएको यति ठूलो खेला महोत्सवमा खेलाडीले भोग्नु परेको यो अभाव र पीडाले देशको बेइज्यत गरेको छ ।
खेलाडीले देशको इज्यत बढाउन अनवरत गरेको मेहनत र लगानीको बदलामा उनीहरुले पाएको यो अपमानको दोषी को हो ? यो प्रश्नको जवाफ खोजिनु पर्छ । सोनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । नेपाली खेलाडीका अभाव र पीडाका यस्ता कथा व्यथा थुप्रै छन् ।
उद्घाटन समारोहमा केही मन्त्री र खेल पदाधिकारी दौरा सुरुवालमा झुल्किए । र, तिनका लागि दौर–सुरुवालसहित कालो जुत्ता सागकै बजेटबाट किनिएको तथ्य खुल्यो । उच्च पदस्थको बहानामा ४० भन्दा बढी व्यक्तिले लिए यस्तो सुविधा । केही मन्त्रीले नलिएको दावी गरेपनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नै निर्देशन समितिमा रहेकासहित उच्च खेल पदाधिकारीलाई दौरा–सुरुवाल र जुत्ताको दिइएको स्वीकारी सकेको छ ।
कहिल्यै दौरा–सुरुवालमा नदेखिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमेत उद्घाटन समारोहमा दौरा–सुरुवालमै देखिएका थिए । तर, विशेषतः क्रिकेट खेलाडीले मार्चपासको बेलासम्म पनि दौरा–सुरुवाल पाएनन् । समयमै औपचारिक पोशाक नपाएपछि क्रिकेटका पारस खड्काले खेलाडीका तर्फबाट ट्राईसुटमै सपथ लिए ।
साग कमजोरीको दृष्टान्त यतिमै सकिदैन् । प्रतिस्पर्धाकै बेला साइकल नपाउनु, ट्राईसुट नहुनु, सुटिङमा निशाना ताक्ने बन्दुक नहुनु, कत्ति हो कत्ति १ देखावटी धेरै गरियो र भयो पनि । तर, खेलाडीले कुन कन्तविजोगबीच पदक जित्दैछन् भन्नेतर्फ ध्यान कमै गएको पाइयो । पदकमा मख्ख छन् खेल अधिकारी । श्रेय लिने होडबाजी पनि सुरु भइसक्यो । तर, भएका कमजोरी स्वीकार्न कोही तयार छैन ।
काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र जनकपुरमा जारी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका अझै धेरै दृश्य देखिएका छैनन । तर, सबै देखिने छन् । कुनै पनि खेल अँध्यारो कोठामा खेलिदैन । र, नतिजा पनि सबैले छर्लङ्ग देख्न पाउँछन् । ट्रयाथलनकी सोनी गुरुङकै नियति भोगे पुरुषतर्फको डुबाथोलनमा नेपालका लागि स्वर्ण जित्ने हिमाल टमाटाले पनि । उनले अभ्यास गर्ने आफ्नै पुरानो साइकल लिएर डुबाथोलनको २० किलोमिटर साइक्लिङको दूरी पार गरे । दौडको भागमा भने सोनी गुरुङको पोशाक लगाए ।
अभावका बीच टमाटाले देशलाई स्वर्ण पदक भने दिलाएरै छोडे । तर, खेलकुदका अधिकारीले यो विषयमा कहिं कतै बोलेका छैनन् । सुटिङमा पनि हालत उस्तै रहयो । निशाना ताक्ने बेलासम्ममा राइफल आएन । खेलाडीले पहिला भारतीय खेलाडीसँग मागे । तर, फ्रेम विग्रने भनेर दिएनन । पाकिस्तानी खेलाडी भने दयावान देखिए । उनीहरुले दिएको राइफल लिएर नेपाली खेलाडीले निशाना साँधे । अर्कासंग मागेको बन्दुकले ताकेको निसाना कहाँसही ठाउँमा लाग्थ्यो र १ नेपाली खेलाडी राउण्ड सिक्स्टिनबाटै बाहिरिए ।
बन्दुकको पीडाबाट नेपाली खेल अधिकारी भुक्तभोगी नै छन् । ल्याउनु पर्ने झण्झट, हातहतियारका विषयमा सरकारले लागू गरेको कडा कानून र विमानस्थलबाट छुटाउँदा भोग्नु पर्ने कठिनाई । यो सबै बुझ्दा बुझ्दै पनि खेल अधिकारीले समयमा नै ध्यान नपु¥याउनु उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बन्यो । तरपनि खेल अधिकारी मागेर काम चलाएको भन्ने खेलाडीको भनाइसँग सहमत छैनन् ।
१३औं सागको समीक्षा हुने छ नै । त्यसबेला यस्ता धेरै विषयले प्रवेश पाउने छ । तर, गैडाको छालाको जति घोचे पनि जति भने पनि नबिझ्ने जस्तो व्यवहार गर्दै आएका खेलकुदका अधिकारीले परम्परागत शैली अब भने त्याग्नै पर्छ । न्युज २४ बाट
पत्याउनै नसक्नेगरी घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् आजको बजार भाउ
नेपालमा पाटे बाघको संख्या दोब्बर हुँदै